Zogam ah hong guklut Bengali mi4kiman :: ZOMI DAILY
posted on 31 January 2018 at 11:58 pm Lomkholna: News, Zomi
Zogam ah hong guklut Bengali mi4kiman ခိုးဝင်ဘင်ဂါလီ (၄) ဦး ချင်းပြည်နယ်တွင်ဖမ်းမိ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်မှ ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်ဂါလီ (၄) ဦးကို ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်တွင် Mualbem ကျေးရွာအနီးတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်း ၁ နာရီခွဲခန့်က ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းမိသည်ဟု သိရသည်။
Vaigam(india) Mizo gam lampan guklut Bengali(kala-mivom)mi li chin state Tedim huan Mualbem khua kiim tuni nai 1 le lang pawl palikte’n man uh hi.
အိန္ဒိယ-မြန်မာ အမှတ် (၂) ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့မှတဆင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးမြို့ဘက်သို့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ ၂ စီးဖြင့် ခိုးဝင်လာသော အသက် (၂၀) အရွယ်ခန့်ရှိကြသော ဘင်ဂါလီအမျိူးသမီး (၃) ဦးနှင့် အမျိူးသား (၁) ဦးကို တီးတိန်မြို့နယ် Mualbem နှင့် Leidawh ကျေးရွာအကြားတွင် ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖလမ်းမြို့ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် လေးလှိုင်ကပြောသည်။
India-Myanmar gam No.2 kizopna phual Lih/Rih Khua-myo pan Sagaing div. kalay myo lamzuan in cycle nih tawh guklut kum 20 gual mivom/bengali numei3le le pasal 1pen Tedim huam Mualbem khua le Leidawh khua kikal ah kiman in Falam/phalam palik phualpi makaipa’n gen hi.
“ တီးတိန်မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးကနေပြီးတော့ ဖလမ်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံ အကြောင်းကြားလာတော့ ကျနော်တို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ရှာကြတာပေါ့ မနက် ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမား ၂ ဦးအပါအ၀င် ဘင်ဂါလီ ၄ ဦးဖမ်းမိတာ’’ ဟု ရဲအုပ်ကပြောသည်။
“Tedim AD pa’n Phalam/falam huam palik makaipa kiangah ko kipawlkhawm vaisai pawl zonna tawh zingsang nai 1 le lang pawl in cycle hawlmi nih ban ah Mivom-bengali4akiman zo hi-in ci in palik makai pa’n gen hi.
ယခုအခါ ဘင်ဂါလီ (၄) ဦးနှင့် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ ၂ ဦးကို ဖလမ်းမြို့ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးချူပ်နောင်ကာ စစ်ဆေး နေသော်လည်း ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့် မေးမြန်း၍မရဖြစ်နေကြောင်း ရဲအုပ်ကဆက်ပြောသည်။
hidanaMivom-bengali mi4cycle hawl mi2 pen phalam/falam huam thong/gilbeem ah koih in thu le la kidong mah ta se leh kampau kitellohna tawh hoihtak kidong theilo hi ci in palik makai pan gen hi.
အမှတ် (၂) နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတဆင့် ခိုးဝင်ဘင်ဂါလီများကို ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဖြင့် ကလေးမြို့ဘက်သို့ ပို့ဆောင်မှုများ ယခင်နှစ်များကလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
No.2 gamgi kizopna lam pan ong gullut mivombengalite cycle tawh kalay myo lam apua te apaisa kum inzong om cih thu om hi. Phualva Lungtuak Media
Previous: Tedim ah namgimtui zuaknading amun kihawmsak
Next: A Thukna ah (into the deep)
Japan Gal Sung Dawi Havang Kal Pan – 2
Taiwan meileng atuahsiatma in ahawlpa in Speed-control System khakcip, mi 18 si, 187 liam
Zato zuat hamtang akisam naupaai nupi pawlkhat